Inta u dhaxaysa riyooyinka, waxaa qoray Elio Quiroga
Iyadoo Elio Quiroga waxa uu soo galayay shaleemada aduunka, ururintiisa maansooyinka waxa kale oo ay ka dhex muuqanayeen marinkaas isaga oo tifaftiraya qoraa ama gabayaa kasta oo soo baxa.
Laakiin in laga hadlo Elio Quiroga maanta waa in la tixgeliyo hal-abuuraha dhinacyo badan leh, gabayaaga, qoraaga sawir-qaade iyo sheeko-yaqaan leh asal kaas oo u dhexeeya magacaabista Goya ilaa abaalmarinta Minotauro 2015 ee sharafta leh, taas oo u taagan sida ugu wanaagsan Fantasy ama Fiction Fiction ee sanadka ee Spain. .
Waxayna si sax ah u tahay goobta khayaaliga ama mala-awaalka sayniska ee ku dhamaanaya inay noqoto beer bacrin ah oo fikraduhu ay had iyo jeer ka soo bixi karaan kala badh inta u dhaxaysa sheeko kaliya iyo shaleemo.
Oo halkaas waxaan ka heli this sheeko cusub u dhexeeya riyooyin.
Ma jiro wax ka fiican meel la mid ah kormeeraha kanary ee Roque de los Muchachos, oo leh mid ka mid ah teleskoobyada ugu awoodda badan adduunka, si ay u xudeeyaan sheekadan oo leh dhibic claustrophobic ah iyo xusuusta filimka. "Iftiinka" isla markaana ku soo gebagebaynaysaa soo jeedin ka hadlaysa mala-awaalkan cilmi-baadhiseed ee la heli karo, oo dhammaanteen aynu mararka qaarkood u joogsanayno si ay u fiirsadaan xiddigaha.
Sonia iyo Juan waxay sameeyaan lamaanaha ugu fiican ee xirfadlayaasha ah iyo kuwa shakhsi ahaaneed. Labaduba waxay jecel yihiin astrophysics-ka iyo ku hareeraysan dareenkaas cosmic waxay sidoo kale abuureen jacayl hadda uun mideeyay weligood.
Kaliya sababtoo ah kuwa xaddidan "weligiis", si la jaan qaada caalamka aan dhammaadka lahayn, waxay ku dhammaataa sheeko xiiso leh oo soo koobaysa shaki nafsi ah, khiyaano, qadar wanaagsan oo argagax leh iyo laxanka filimada si fiican u hogaaminaya agaasimaha filimka ayaa noqday qoraa.
Sababtoo ah Robert laguma martiqaadin "safarka bisha malabka ee aan caadi ahayn" ee telescope La Palma, halkaas oo lammaanuhu isku diyaarinayaan inay qabtaan shaqo ka dhigi doonta inay keligood mashquuliyaan dhowr maalmood. Oo weliba muuqaalkiisa aan la tuhunsanayn ayaa ah meesha ugu sarreysa ee Sonia iyo Juan.
Meel kasta oo joogitaankaas doonaya in uu ku weheliyo baadhitaankooda kelinimada ah ee xiddigaha, waxay ku dhammaatay inay farageliso riyada Juan, ilaa uu ka helayo baakado badan oo ka mid ah kii uu martida u ahaa.
Hadda waxaad ka iibsan kartaa buugga cusub Entre los Sueños, buugga cusub ee Elio Quiroga, halkan:
Tags Elio Quiroga, Novelties ee sheeko cusub, Sheekooyinka sheekooyinka sayniska